commentsSouth Africa 2 Sudan 1: Bafana seal AFCON qualification
Thulani Serero scored his first international goal as South Africa qualified for the Africa Cup of Nations by beating Sudan 2-1 in Durban.South Africa coach Shakes Mashaba had urged his team to secure the three points they needed on Saturday to ensure they would feature in next year's tournament in memory of murdered captain Senzo Meyiwa.
SHARES	Thulani Serero2 June 2016 Gambia v South Africa: Serero not throwing in the towel South Africa's Thulani Serero has urged his team-mates to keep fighting as they chase Africa Cup of Nations qualification. SHARES	Thulani Serero30 December 2014 Serero left out of South Africa squad Ajax midfielder Thulani Serero has been left out of the South Africa squad for the Africa Cup of Nations. SHARES	Tsepo Masilela3 September 2015 Mauritania v South Africa: SAFA to investigate Masilela no-show South Africa will be without Tsepo Masilela in the African Cup of Nations qualifier against Mauritania after he failed to report for duty. SHARES	South Africa3 September 2014 Sudan vs South Africa: Vital points on offer in historic AFCON tie Sudan and South Africa square off in their historical Africa Cup of Nations qualifying Group A opener knowing three points are crucial. SHARES	13 November 2014 South Africa v Sudan: Meyiwa memory to inspire hosts South Africa coach Shakes Mashaba has called on his team to beat Sudan and qualify for AFCON in memory of murdered captain Senzo Meyiwa. Latest News